Tatoazy raozy kely, marefo ary be dia be | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy raozy kely, marefo ary be zavatra be
Nat Cherry | | Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Tatoazy raozy kely tsara tarehy eny an-tànany (Fuente).
Ny tatoazy kely raozy dia ampahany amin'ny tatoazy raozy, iray amin'ireo endrika tatoazy mahazatra sy manan-tantara indrindra, na dia amin'ity tranga ity aza, araka ny eritreritrareo azy ireo dia misafidy habe kely izy ireo.
Ho fanampin'ny maha-sombin-javatra mahazatra anao ary saika ilaina raha tianao ny ranomainty, tatoazy an'ny raozy kely dia iray amin'ireo mety an'arivony voninkazo ity. Noho ny haben'ny azy ireo dia tonga lafatra izy ireo raha mitady zavatra malina nefa miaraka amin'ny fomban-drazana.
1 Hunks Persian sy tantsambo matavy: ny dikany taloha amin'ny tatoazy ireo
2 Aiza ireo karazana tatoazy tsara kokoa ireo?
3 Mazava be ny fomba
3.1 Tatoazy mavo mainty sy fotsy, kilasika
3.2 Tatoazy misy raozy miaraka amin'ny karan-doha Meksikana
3.3 Raozy kely misy hidy, mihidy ny fonao
3.4 Roazy tatoazy amin'ny tarehy ho an'ny sahy indrindra
3.5 Tatoazy kely raozy, zara raha mahita azy ireo ianao!
3.6 Tattoos misy fehezan-teny sy raozy
3.7 Raozy nentim-paharazana, somary lehibe kokoa
3.8 Raozy soroka, ho an'izay tsy manana tenda
3.9 Raozy sy karan-doha, duo mahatalanjona
3.10 Raozy tsy dia vita, endrika kanto sy hafa
3.11 Raozy izay very ny anarany aoriana
Hunks Persian sy tantsambo matavy: ny dikany taloha amin'ny tatoazy ireo
ny tombokavatsa raozy kely na lehibe niavian'ny vorontsiloza ary izy ireo dia nifandray tamin'ny voalohany, a mariky ny maha lehilahy.
Misimisy kokoa amin'ny androntsika, ny mavokely sendra a mariky ny fitiavana. Saingy tsy nisy izany telopolo taona, na izany aza, izany tombokavatsa raozy nanomboka nandresy ny laza izay ankafizin'izy ireo ankehitriny ary, angamba, ny fandraisana ilay toetra nentim-paharazana vehivavy miaraka aminy. ny tantsambo dia vita tatoazy kely raozy ho fahatsiarovana ny azy ireo vehivavy, reny, rahavavy sy sakaiza.
Raozy somary lehibe kokoa manao tombokavatsa amin'ny ankihiben.
Izy io indrindra Bonito eritrereto izany ampahany amin'ny zavamaniry ary avy amin'ny tany, a an'ohatra ny Ry malala, niaraka tamin'izy ireo tamin'ny dia lavitra nataony ho any amin'ny avo Mar, rehefa manjavona ny fofona ary ny ranomasina irery sisa.
Aiza ireo karazana tatoazy tsara kokoa ireo?
Misaotra ny endrik'izy ireo boribory sy voalanjalanja, ny raozy dia toa tsara na aiza na aiza. Na izany aza, raha miresaka momba ny raozy kely isika anio dia tadidio izay amporisihinay ho an'ny tatoazy mitovy habe amin'io. Aza atao toerana ohatra, ohatra, ny lehibe toy ny any aoriana ary misafidiana toerana tery kokoa, toy ny hatotan-tanana, soroka, tendany, tanana, tongotra, kitrokely, lohalika ...
Raha toa ka eny na eny ny tatoazy kely amin'ny toerana lehibe toa ny any aoriana, tadidio ny mangataka torohevitra amin'ny mpanaingo anao ary misafidy toerana akaiky ny sisiny (ohatra ny soroka, valahana ...) mba tsy hahavery ny endrika amam-bika.
Mazava be ny fomba
Ahoana no fomba hafa, Ny tatoazy kely raozy dia tena be mpampiasa indrindra, toy ireo rahavaviny, tatoazy rose. Manaiky ny karazan-drafitra rehetra izy ireo, na nentin-drazana, maoderina, loko rano, mainty sy fotsy ... ary saika ny toerana rehetra eo amin'ny vatana, na dia toy ny amin'ny ankamaroan'ireo tranga ireo aza, ny toerana tery izay mandrafitra ilay sombin-javatra dia tena amporisihina indrindra, raha kely izy io. Ireto misy hevitra maro hanentanana anao.
Tatoazy mavo mainty sy fotsy, kilasika
Ny tatoazy raozy mainty sy fotsy kely dia mety tsara raha toa ka endrika malina ny zavatra tadiavinao, hany ka mety tsy ho tsapan'ny olona akory fa ianao no mitondra azy. Aza adino fa amin'ny famolavolana kely toy izany dia tsara kokoa ny mametraka azy ireo amin'ny toerana voahidy amin'ny vatana amin'ny fomba voajanahary, toy ny kitrokely na ny soroka.
Tatoazy misy raozy miaraka amin'ny karan-doha Meksikana
Ny raozy dia tsy mety ho kely fotsiny, fa azo ampidirina amina endrika hafa koa. Amin'ireo tranga ireo, mazava ho azy, mila habe somary lehibe kokoa ianao. Raha mitady karandoha meksikana toa an'ity ianao dia misafidiana famolavolana miloko feno mba hahazoana tombony betsaka amin'izany.
Raozy kely misy hidy, mihidy ny fonao
Ny padlocks sy ny raozy dia mitambatra mahatalanjona, angamba noho ny hevitro mifono mistery sy tantaram-pitiavana. Ny raozy dia afaka maneho ny olon-tianao, raha ny hidiny kosa dia famantarana fa entinao manakaiky ny fonao izy.
Roazy tatoazy amin'ny tarehy ho an'ny sahy indrindra
Ny tatoazy mavesatra sy manaitra tokoa, ny tarehy dia tsy ratsy raha te hisarika ny saina ianao. Ary raha tsy izany dia manana safidy foana ianao haka tatoazy sandoka sy manome tahotra ireo olon-tianao. Na izany na tsy izany, misafidy famolavolana kely nefa mahitsy. Ny raozy koa dia tena tsara amin'ny loha, somary malina kokoa raha lava volo ianao.
Tatoazy kely raozy, zara raha mahita azy ireo ianao!
Ary miresaka raozy kely Ahoana ny famolavolana misy raozy kely dia kely ka tsy hita? Atambaro miaraka amina loko iray izy (mandeha tsara ny pastel) na ataovy tsotra amin'ny mainty sy fotsy, amin'ny lafiny roa dia tsara tarehy sy marefo izy ireo.
Tattoos misy fehezan-teny sy raozy
Iza no milaza ny fehezanteny milaza teny ary na ny anaran'ny olon-tiana aza. Araka ny efa nolazainay teo am-piandohan'ny lahatsoratra, ny raozy matetika dia tandindon'ny olona iray izay inoantsika fa tena manokana, noho izany ireo endrika izay isehoan'ny anarana ihany koa dia malaza be.
Raozy nentim-paharazana, somary lehibe kokoa
Raha maniry tatoazy raozy kely ianao dia angamba ilay fomban-drazana no safidy ho anao, na dia eny tokoa aza dia mitaky habe somary lehibe kokoa izany. noho ny ambin'ireo endriny hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Tsotra ny antony: ny tatoazy nentim-paharazana dia matetika no voasoratra miaraka amin'ny tsipika matevina izay mety hiafara amin'ny fihinanana ny ambin-drafitra rehefa mandeha ny fotoana raha toa ka kely loatra.
Raozy soroka, ho an'izay tsy manana tenda
Ho an'ireo izay manana vazivazy mahatsikaiky sy fanoherana ny fanaintainana sy ny taolan-tehezana epic, ny raozy eo am-pelatanana dia mety tsara. Mazava ho azy fa tsy maintsy ampifanarahinao amin'ny haben'ny felonao sy ianao hatsembohana ny horohoro hanasitranana azy, saingy… fofona raozy foana ianao!
Raozy sy karan-doha, duo mahatalanjona
Raha maniry zavatra misy dikany lalina kokoa ianao, manomeza vintana hamolavolana raozy sy karandoha, tandindon'ny fiainana sy ny fahafatesana. Ho fanampin'izany, manohana fomba maro (nentim-paharazana, zava-misy) izy io ary atambatra ny angano na amin'ny loko, amin'ny mainty sy fotsy, miaraka amin'ny loko raozy ihany ...
Raozy tsy dia vita, endrika kanto sy hafa
Famolavolana iray hafa izay toa tsara amin'ny tatoazy raozy kely dia ny tsy mahaliana. Efa niresaka tamin'ny fotoana hafa momba an'io famolavolana mahaliana izay mandalo amin'ny fiainanao io izahay ary mampiseho ny fotoana tsara indrindra sy ratsy indrindra nataonao. Ampifanaraho amin'ny raozy malina izy ireo mba hikasika bebe kokoa anao manokana.
Raozy izay very ny anarany aoriana
Ary farany, na dia tsy lamaody intsony aza ankehitriny, dia tsy tokony hadinontsika ny kilasika amin'ny kilasika: tatoazy raozy amin'ny vodiny ambany. Na raozy tokana eo afovoany na raozy roa ambonin'ny voa tsirairay dia azonao atao ny manararaotra ny tombokavatsa amin'ity faritra ity amin'ny fanomezana azy ireo loko iray, ohatra.
Ny tatoazy kely raozy dia safidy tsara foana ary mijery tsara foana izy ireo, na inona na inona ianao, na manao tombokavatsa hatramin'ny loha ka hatramin'ny tongotrao na ny endrika voalohany. Ary ianao, manana tatoazy toy izao ve ianao? endrika inona no tianao indrindra? Mihevitra ve ianao fa mila maneho hevitra momba izany izahay? Tadidio fa azonao atao ny milaza aminay izay rehetra tadiavinao, noho izany, mila mamela hevitra fotsiny izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tatoazy raozy kely, marefo ary be zavatra be
Tattoos amin'ny marika manjavozavo, mamaha ny fisalasalanao rehetra izahay
Tatoazy kely Buddha, ny bodista mora indrindra sy tsapa indrindra